सक्रिय पदार्थ "Akinetona" biperiden hydrochloride छ। गोली सक्रिय पदार्थ को2मिलीग्राम accommodates। यसबाहेक, अतिरिक्त घटक (मकै स्टार्च, आलु स्टार्च, lactose monohydrate, म्याग्नेसियम stearate, microcrystalline सेलूलोज, copovidone, क्याल्सियम हाइड्रोजन फस्फेट dihydrate, पाउडर, शुद्ध पानी) को उपस्थिति दबाइ "Akineton" मान्छ।
प्रयोगको लागि निर्देशन, फोटो दबाइ को ट्याब्लेट फारम व्यावहारिक सेतो रङ, Valium फारम छ सुझाव। ट्याब्लेट को एक छेउमा एउटा beveled पार आकार को जोखिम छ।
समाधान को 1 एमएल5मिलीग्राम को राशि मा biperiden lactate समावेश गर्दछ। थप घटक हो: पानी र इंजेक्शन सोडियम lactate।
मुख्य घटक biperiden - holinoblokator केन्द्रीय कार्य।
को प्रभाव extrapyramidal सिस्टम को संरचनात्मक एकाइ छ जो striatum मा cholinergic, neuronal गतिविधि गर्ने क्षमता, depressing समावेश छ।
दबाइ को बाह्य (antispasmodic) मा ganglioblokiruyuschimi प्रभाव, antispasmodic र मध्यम कठोरता पु-anticholinergic प्रभाव हुन्छ।
दबाइ को प्रयोग हटाउन मदत गर्छ limb कम्पन, cholinergic, लागूपदार्थ (जस्तै, pilocarpine) र neuroleptics प्राप्त रोगियहरुमा catalepsy र मांसपेशी rigidity को प्रयोगमा खडा छ। यो induce गर्ने क्षमता छ आन्दोलन।
91-94% मा प्लाज्मा प्रोटीन गर्न बाध्य "Akineton"। प्लाज्मा अवकास 11.6 ± 0.8 एमएल / मिनेट / किलो शरीरको वजन हुनेछ। को मौखिक तैयार को एक एकल खुराक बारेमा 33 ± 5% को एक bioavailability छ।
स्तन दूध मा पार।
Biperiden पूरै मानव शरीर मा metabolized। मूत्र मा, पदार्थ unaltered फारममा निर्धारित छैन। प्रमुख metabolites जो मलको र मूत्र देखि उत्पादन हो, bicycloheptane र piperidine छन्।
दोस्रो चरण - Elliminatsiya बाहिर दुई चरणहरु मा पहिलो चरण र 24 घण्टा अवधिमा आधा जीवन (टी 1/2) 90 मिनेट को संग, लगे। वृद्ध विरामीहरु मा, आधा-जीवन एकदम बढाउन सक्छ।
केही दबाइहरु (neuroleptics, antipsychotics) को प्रशासन द्वारा गराइएको extrapyramidal विकार प्रयोग "Akineton"।
साथै, दबाइ रोग को निदान को लागि संकेत छ पार्किंसंस गरेको सिंड्रोम, parkinsonism (एक आधार संग संयोजन चिकित्सा मा प्रबन्ध एजेन्ट)
तपाईं दबाइ "Akineton" को सक्रिय संघटक गर्न hypersensitive हुँदा यस दबाइ को उद्देश्य देखाइएको छैन।
प्रयोगको लागि निर्देशन दबाइ यस्तो प्रोस्टेट वृद्धि, कोण-बन्द मोतिबिन्दु, को आन्द्रा मा obstructive परिवर्तनहरू (pylorus stenosis, paralytic ileus उत्पत्ति) रूपमा रोगी रोग को निदान मा बचा पर्छ भनेर जानकारी।
Arrhythmia, मिर्गी, स्तनपान, वृद्ध, गर्भावस्था जसमा "Akineton" ठूलो सावधानीपूर्वक प्रबन्ध गर्ने कारक हो।
CNS साइड इफेक्ट asthenia, थकान, lethargy, कमजोरी, numbness, चक्कर आना, चासो, चिन्ता, स्मृति हानि, अन्योल, विभ्रम, catalepsy को भावना, लागूपदार्थ निर्भरता दबाइ प्रकट गर्दै "Akineton"।
mydriasis, आवास को खलबल - पक्ष-प्रभाव बारे र दर्शनको एक भाग संग कुरा प्रयोगको लागि निर्देशन।
कार्डियो-भास्कुलर सिस्टम हृदय दर (tachycardia) को quickening द्वारा विशेषता छ; कहिलेकाहीं - deceleration (bradycardia); तयारीको एक इंजेक्शन फारम लागू गर्दा - रक्तचाप (hypotension) मा घट्छ।
सुक्खा मुख, dyspeptic लक्षण, कब्जियत - पाचन प्रणाली को भाग मा।
चयापचय को भाग मा - डराएको घटाउनुहोस्।
वृद्धि प्रोस्टेट ग्रन्थि को (hypertrophy) संग विरामीहरु मा - - यो मूत्र प्रणालीको भाग मा सम्भव कठिनाई वी डी।
एलर्जी प्रतिक्रिया: छाला मा दाना, खुजली।
intramuscular लागि नसों, र मौखिक ट्याब्लेट फारम फिट तयारी "Akineton" छ।
प्रयोगको लागि निर्देशन चिकित्सा "Akinetonom" साधारण को खुराक थप stepwise बढ्छ इच्छित चिकित्सकीय प्रभाव र साइड इफेक्ट लागि आधार, सानो खुराक देखि सुरु सुझाव।
तयारी एक मौखिक फारम को प्रयोग मा वयस्क प्रति दिन दुई खुराक विभाजित दिन को समयमा 1 मिलीग्राम 1-2 स्वागत वा2मिलीग्राम को एक खुराक उपचार सुरु गर्नुहोस्। यसबाहेक, औषधिको खुराक 8 मिलीग्राम चार दुई गर्न विभाजित खुराक वृद्धि गर्न सकिन्छ। तथापि, खुराक प्रति दिन2भन्दा बढी मिलीग्राम वृद्धि हुँदैन। अधिकतम औषधिको खुराक पाँच दिनको लागि बिहिबार-16 मिलीग्राम मा अर्थ6भन्दा बढी छैन। एकल खुराक इंजेक्शन दबाइ फारम 2.5-5 मिलीग्राम भन्दा बढी हुँदैन। यो खुराक आधा एक घण्टा पछि पटक-पटक हुन सक्छ, तर प्रति दिन प्रशासनहरू संख्या4पटक भन्दा बढी हुँदैन। इंजेक्शन फारममा दवादारू अधिकतम खुराक पाँच दिनको लागि 20 मिलीग्राम छ। जब इष्टतम खुराक को स्वागत गर्न, त्यसपछि एक संक्रमण पुगेको छ "Akinetona retard।"
तर नियुक्ति biperidenom चिकित्सा प्रत्येक रोगी गर्न व्यक्तिगत दृष्टिकोण बारे मा भूल छैन।
कारण केही दबाइहरु (antipsychotics वा neuroleptics) को इन्जेशन गर्न arising Extrapyramidal विकृति orally वा parenterally2मिलीग्राम को एक खुराक मा दिइएको पदार्थ को जिम्मेवारी आवश्यक छ। भने खुराक को प्रशासन दोहोरिने हरेक आधा घण्टा हुन सक्छ। तर, माथि संकेत रूपमा, प्रशासनहरू संख्या4पटक भन्दा बढी हुँदैन। यो मौखिक खुराक एक तीन खुराक विभाजित गर्नुपर्छ।
पार्किंसंस रोग एक दिन को लागि 2-4 विभाजित खुराक मा 6-8 मिलीग्राम मा orally दबाइ प्रशासन समावेश, को खुराक बिस्तारै 6-16 मिलीग्राम सम्म वृद्धि गर्न सकिन्छ।
वर्ष उद्देश्य अन्तर्गत बच्चाहरु धीरे इंजेक्शन को रूप मा दबाइ को संभावना, 1 मिलीग्राम वा 0.2 एमएल को एक खुराक सुझाव। एक वर्ष देखि छ वर्षसम्म उमेर2मिलीग्राम वा 0.4 एमएल प्रबन्ध गर्दा। देखि610 वर्ष -3मिलीग्राम वा 0.6 एमएल। यो खुराक आपतकालीन एउटा आधा घण्टा पछि पटक-पटक हुन सक्छ। दबाइ को प्रशासन मा प्रतिकूल प्रभाव को उपस्थिति मा रद्द इंजेक्शन हुनुपर्छ।
दिन को समयमा 1-3 घण्टामा 1-2 मिलीग्राम को औषधिको खुराक लिएर315 वर्ष देखि उमेर मा दबाइ उपचार को मौखिक फारम समयमा।
यस ट्याब्लेटको खाली पेट मा पिउन सक्दैन, र तपाईं पानी को एक मध्यम रकम पिउन पर्छ। प्रभाव खराब पक्ष पाचन प्रणालीबाट को घटना मा दबाइ पर्नसक्ने प्रभाव खुलारूपमा कम, खानाको पछि तुरुन्तै लिनुपर्छ अर्थ "Akineton"।
प्रयोगको लागि निर्देशन वयस्क मा निकोटीन विषाक्तता को मामला मा मानक जटिल उपचार पनि यस दबाइ प्रबन्ध छ भन्ने संकेत गर्छ, र यसको खुराक इंजेक्शन प्रकारका लागि 5-गु-टीबी-10 मिलीग्राम छ, तर केवल बिरामीको जीवन खतरामा छ कि अवस्थामा।
जैविक फस्फोरस मिश्रण विषाक्तता जब biperiden dosing घाउ खुलारूपमा आधारमा व्यक्तिगत रूपमा बाहिर छ। नसों प्रशासन को मामला मा5मिलीग्राम को एक खुराक देखि सुरु, पटक-पटक प्रशासनलाई सम्म लक्षण विषाक्तता गायब जारी।
अधिमात्रा को चिकित्सा "Akineton" कारण उच्चारण anticholinergic प्रभाव प्रकट।
प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक डाक्टर तथ्यलाई ध्यान यो अवस्था posimptomnaya (, को हृदय र श्वसन प्रणाली, अक्सिजन चिकित्सा, अतिताप सुधार, एक मूत्र कैथिटर सेटको मर्मत आवश्यक भएमा) को उपचार। को परिचय आवश्यक एक cholinesterase अवरोध (physostigmine मुख्यतया) ।
"Akineton" m-holinoblokatorami को प्रयोग, एक antihistamine र antiepileptic कार्य भइरहेको लागूपदार्थ उत्तरार्द्ध को अभिव्यक्ति बढाउँछ गर्दा। तथापि, metoclopramide को साथ आवेदन यसको चिकित्सकीय प्रभाव कम गर्छ। इथेनल त्यहाँ निश्चित दबाइ अमिल्दो। dyskinesia लक्षण विकास को जोखिम समयमा नियुक्ति quinidine बढ्छ। levodopa लागू गर्दा एम-cholinergic, प्रभाव बढेको छ।
भण्डारण र बिक्री
यस दबाइ किन्न गर्न फार्मासिस्ट प्रदान गर्न एक निर्धारण आवश्यक छ। भण्डारण गर्न "Akinetona" ई परिवेश तापमान 25 डिग्री (सेल्सियस मापन) भन्दा बढी हुँदैन, तापमान पालन गर्न टी आवश्यक छ।। हामी सुविधा "Akineton" केटाकेटीलाई को पहुंच आवश्यक छ।
पाँच वर्ष - पुस्तिका दबाइ को आफ्नो जीवन दिन्छ।
गर्भावस्था र स्तनपान (lactation) को समयमा biperiden को नियुक्ति सख्त सङ्केत गर्छ आवश्यक छ।
Biperiden दबाइ "Akineton" को विच्छेदन गर्न स्तनपानको अस्थायी विफलता कारण, स्तन दूध मार्फत बच्चा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
उत्पादन विवरण खातामा शिशु गर्न सम्भावित जोखिम लिन, भ्रूण गर्भावस्था र lactation समयमा biperiden को नियुक्ति निर्णय त्यस बाहिर अंक।
वृद्ध यस दबाइ संग उपचार को लागि एक जोखिम कारक बन्दछ। त्यसैले "Akineton" ठूलो सावधानी मानिसहरूलाई यस समूह नियुक्त।
बाल्यकाल मा सुरक्षा को प्रयोग कुनै पनि प्रमाण को Kickaha अभाव, दबाइ छोराछोरीलाई "Akineton" लागू गर्दैन कारण छ।
तयारीको (निर्देश पुस्तिका) को विवरण मिर्गी वा fibrillation संग विरामीहरु यो दबाइ प्रयोग गर्दा सावधानी आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई निर्दिष्ट गर्दछ।
लामो समयसम्म प्रयोग संग दबाइ निर्भरता विकास हुन सक्छ।
निकासी सिंड्रोम को जोखिम चिकित्सा को क्रमिक अवरोध "Akinetonom" समावेश छ।
रक्सी-युक्त पेय पदार्थ को प्रयोग उपचार समयमा बचा गर्नुपर्छ।
यसलाई कारण चक्कर आना को जोखिमको सम्भावित खतरा संग वहन देखि यस दबाइ संग उपचार, उच्च एकाग्रता र तीव्र psychomotor प्रतिक्रिया आवश्यकता वाहन र खेल गतिविधिहरु ड्राइभिङ देखि abstinence आवश्यक छ।
"Akineton"। प्रयोगको लागि निर्देशन। analogs
तयारी को पर्यायवाची निम्न पदार्थ हो: "Biperiden" "Mendileks" "biperiden hydrochloride"।
दबाइ को limb मा Parkinsonism tremors को उपचार छोटो समय अन्तराल पछि बर्खास्त छ मा अत्यधिक प्रभावकारी हुन्छ। राम्रो-सहन दबाइ "Akineton" भन्छन्।
केही साइड इफेक्ट को प्रकटीकरण को संभावना कुरा दबाइ लिइरहेको गर्दा फोरम प्रतिक्रिया।
मूल्य "Akinetona"। जहाँ किन्न
समाधान को लागत वरिपरि 800 rubles हुन सक्छ।
मूल्य मौखिक निरूपण "Akinetona" - 560-580 rubles।
काँच समान: इंजेक्शन को प्रयोगको लागि निर्देशन
"बेटाडेइन" अनुष्ठान - अनुप्रयोगको विशेषताहरू
कीटनाशक "कन्फिडोर": प्रयोगको लागि निर्देशन
"बेलेम" दबाइ। प्रयोगको लागि निर्देशन
Adapepress: प्रयोगको लागि समीक्षा र निर्देशन
दूध वा ससेज - कसरी यो थप क्यालोरी समावेश निर्धारण?
अंग्रेजी परम्परा - संसारमा सबैभन्दा पुरानो एक!
स्नान संकल्प। अधिकतम स्नान आकार, डिजाइन
Endometrial hyperplasia: प्रभाव, कारण
छोराछोरीको Norma ESR। के कुरा हुनुपर्छ?